WARAYSI-Xagee Ku Dambeeyey General Moorgan Maxaase Kajira Inuu Ka Tanaasuley Musharaxnimada Puntland.
Puntlandnews.net (Nairobi)-General Maxamed Siciid Xirsi (Moorgan) oo kamid ahaa saraakiishii ugu sarraysay ee ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed dowladdii kacaanka ayaa bartamihii sanadkaan 2018 ku dhawaaqay inuu u sharaxan yahay xilka madaxtinimada Puntland.
General Moorgan oo xaflad ballaaran ku qabsaday magaalada Boosaaso ayaa shaaciyey inuu u taagan yahay xilka madaxtinimada Puntland, waxaana intaasi kadib uu socdaal dhulka ah ku maray Boosaaso ilaa Galkacyooo siweyn loogu soo dhoweeyey.
Intaasi kadib Moorgan ayaa ka dhoofay magaalada Garoowe waxaana uu u kicitimay magaalooyinka Nairobi iyo Muqdisho isagoona aan ilaa hada wadin wax abaabul doorasho ah marka loo barbar dhigo musharixiinta kale ee xilka u tartamaysa.
Dad badan ayaa ilaa hadda iswaydiinaya in General Moorgan uu ka tanaasuley doorashada madaxtinimada Puntland, haseyeeshee ilo xogagaal ah oo Puntlandnews la hadlay ayaa xaqiijiyey inaysan waxba kajirin warkaasi uuna musharuxu geli doono halka codayntu ka dhacayso walow rajadiisu aysan badnayn ee uu kujiro xuluufaysi siyaasadeed.
HALKAAN KA DAAWO WARAYSIGA MOORGAN